Mmemme ngwanrọ na-agbanwe agbanwe na nke a kwadoro na mahadum »Mahadum Hodges
Categories: Ntuziaka Ntanetị
Anyị nọ na Nduzi Mmụta Ntaneti!
Na Mahadum Hodges, anyị ghọtara na ịmụ ihe n'ụwa taa nke ọtụtụ ọrụ na usoro ezinụlọ nwere ike ime ka o yie ihe siri ike ịlaghachi ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ya mere anyị ji mezigharị ọtụtụ mmemme anyị na campus ka e wee were ha n'ịntanetị. Mgbanwe mgbe ị na-emezu ogo gị bụ ụzọ kachasị mma iji nwee ike ịga nke ọma, anyị makwaara ya. Mụ akwụkwọ ndị ọzọ toro eto agafeela otu ụzọ ahụ ị na-atụle ma chọpụta na ha nwere ihe ịga nke ọma na mmemme ogo mmụta n'ịntanetị.
Bachelor Degree Centre: 10 Ọtụtụ Bachelor bara uru na ntanetị na ntanetị nke 2020
Ntụziaka Na Schoolslọ Akwụkwọ Ntanetị: 2020 kacha mma na kọleji dị na Florida
Lọ akwụkwọ kachasị mma: 25 Bachelor kacha mma na ntanetị na mmemme cybercrime
Kasị Mma College Nyocha: Mmemme Bachelor nke 25 na ntanetị na eserese eserese
Lọ akwụkwọ kachasị mma: 2020 Best Bachelor's Software Engineering Degree
Lọ akwụkwọ Paralegal kacha mma n'ịntanetị: Mmemme Degree Degree nke 10 kacha mma na ntanetị
Ntanetị U: Mostlọ akwụkwọ kọleji dị ọnụ ala nke 2019 maka ogo ogo
Mmemme Ntanetị dị elu
Nabata na Mmemme Grammar Online nke Mahadum Hodges, sistemụ usoro iji ghọta usoro ụtọ asụsụ Bekee sitere na isi ruo ọkwa ọkwa dị elu. Ezubere usoro mmemme nke onwe anyị maka ndị okenye na-abụghị ndị Bekee ka ha ghọta asụsụ ụtọ ma jiri obi ike na-asụ Bekee. Nweta nkà ị chọrọ na nouns, ngwaa, nkebiahịrị,…
Ahịa nke oge a
Mụta usoro mgbasa ozi dị irè nke na-ebute gị n'ihu asọmpi ahụ.
Họrọ oke ịzọ ụkwụ na atụmatụ gị n’ọdịnihu, ihe ọ bụla ha nwere ike iji wee nweta asambodo ọmụmụ gbasara ịdọ aka na ntị.
Nhazi Dijitalụ na eserese
Jiri ogo ihe okike gi na nka ihe di iche na Digital Design and Graphics.
Ihe gbasara iwu
Nweta Ọzụzụ Nrite Akara Maka Ndị Nlekọta Iwu na Iwu.
Ngbanwe nke Psychology na-agbanwe agbanwe dị ukwuu maka ọrụ ọ bụla.
Na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụwa juputara na Degree na Akaụntụ.
Nlekọta Mmemme Ntanetị Online
Mmemme Degree N'ịntanetị Na-eduga
Uru nke Hodga Hodges U Maka Degree Online ma ọ bụ Asambodo
Maka na anyị mepụtara ụzọ akara ugo mmụta maka ndị na-amụ ihe n'ịntanetị, ị ga-ahụ uru ndị ka mahadum ndị ọzọ dị n'ịntanetị.
Prọfesọ dị iji zaa ajụjụ gị. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ zuru oke na-enye mmemme ọdịnala na ntanetị. Ngalaba anyị na-enyere gị aka ịza ajụjụ gị ma nyere gị aka ịme nke ọma. Na mgbakwunye, ngalaba anyị karịrị akarị usoro mmụta nkuzi siri ike achọrọ maka nzere mpaghara na mmemme.
Anyị ogo mmemme na-n'ụzọ zuru ezu engineered maka okenye na-amụ. Ime mgbanwe n’usoro ihe omume ọ bụla bụ ihe na-eme anyị pụrụ iche. Anyị abụghị naanị mahadum na-enye nkuzi n'ịntanetị. Anyị bụ mahadum enyere gị aka ịga nke ọma.
Won't gaghị emebi ụkpụrụ maka ịdị mma. Anyị bụ ndị a na-nyere ikike online mpaghara mahadum. Nzere ntozu mpaghara dị ike ma chọọ nsonaazụ ụmụ akwụkwọ gafere ọkwa nzere mba. Na Hodges U, ị ga-enweta agụmakwụkwọ ka mma.
Ndị prọfesọ anyị nwere ahụmịhe nke ụwa. Ha nwere ike inye gị nkà ị ga-eji tinye n'ọrụ gị ugbu a. Malite iji nkà ị mụtara taa.
Kanvas bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị anyị na-eji maka nnyefe nke ịntanetị, na-eme ka mmekọrịta ndị ọgbọ na nkwado nkuzi dị adị. Izi ozi ozigbo, oge ọrụ ọfịs maka ndị nkuzi, lekchọ edekọ edekọ, yana oge ọgbakọ na-emekọrịta ihe oge niile dị na ahụmịhe mmụta mmụta dị na mahadum Hodges Mahadum.
Mee mgbanwe ọdịnihu gị ga - ekele gị. Malite na ntanetị taa!
Ọkwa na usoro nnabata asambodo
Na Mahadum Hodges, ọtụtụ kọleji anyị dị na ịntanetị. Anyị achịkọtara ndepụta nke mmemme nna ukwu, bachelor, mkpakọrịta, na asambodo nke enwere ike iwere na ntanetị, site na ebe ọ bụla na steeti 49 anyị na-eje ozi.
O = Agụmakwụkwọ niile na Degree Program a nwere ike mezue zuru ezu na ntanetị
B = Ọmụmụ ihe na Mmemme Degree bụ ngwakọ / agwakọta. Fọdụ Agụmakwụkwọ nwere ike mezue zuru ezu na ntanetị ma ụfọdụ usoro ga-agwụ agwụ na-Campus.
C = Agụmakwụkwọ niile na Degree Degree ga-emerịrị na Campus.
ỤLỌ NWA O B C
AA - General Studies Ee Ee Mba
AA - Ikpe ziri ezi nke Criminal Justice Ee Mba Mba
AA - Digital Design and Graphics Focus Ee Ee Mba
AA - Nlekọta Ahụike Ahụike Mba Ee Mba
AS - Akaụntụ Ee Ee Mba
AS - Nchịkwa azụmahịa Ee Ee Mba
AS - Teknụzụ Ozi Teknụzụ Kọmputa Ee Ee Mba
AS - Ọrụ Ahụike Mberede Mba Ee Ee
AS - Nlekọta Ọfịs Ahụike Ee Mba Mba
AS - Nkwurịta Okwu Ọkachamara Ee Ee Mba
AS - Nnyocha nke Paralegal Ee Mba Mba
AS - Ahụike Agwọ nnyemaaka Mba Mba Ee
BS - Akaụntụ Ee Ee Mba
BS - Psychology metụtara Ee Mba Mba
BS - Nchịkwa azụmahịa Ee Ee Mba
BS - Teknụzụ Ozi Teknụzụ Ee Ee Mba
BS - Ikpe Ikpe Ikpe Ee Mba Mba
BS - Ego Ee Ee Mba
BS - Ahụike Ahụike Mba Ee Mba
BS - Ahụike Svs. Nlekọta Ee Mba Mba
BS - Nyocha nke ndi mmadu Ee Mba Mba
BS - Nnyocha iwu Ee Mba Mba
BS - Nchịkwa Ee Ee Mba
BS - Ahịa ahia na Mbuputa Ee Ee Mba
BS - Cybersecurity / ịkparịta ụka n'.ntanet Ee Ee Mba
BS - Nọọsụ Mba Mba Ee
BS - Mmepe Software Ee Ee Mba
Akwụkwọ - AutoCAD Drafting Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Nhazi ihe nkiri Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Njikwa data Ee Ee Mba
Akwụkwọ - E-Business Software Ee Ee Mba
Akwụkwọ - E-Business Ventures Ee Ee Mba
Akwụkwọ - EDiscovery / ịgba akwụkwọ Ee Mba Mba
ESL - Bekee dika Asusu nke abuo Ee Ee Ee
Akwụkwọ - Cybersecurity Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Di iche iche, Ndozi Nhata Ee Mba Mba
Akwụkwọ - Nnyocha gbasara ego / nyocha nke aghụghọ Ee Ee Mba
Asambodo - Ihe eserese eserese Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Enyemaka oche nkwado Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Nkwado Teknụzụ Ozi Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Ọkachamara Ọkachamara Ee Ee Mba
Akwụkwọ - Mmemme Ọgwụ Ọrịa Ọgwụgwọ Ee Mba Mba
Akwụkwọ - Ahụmahụ Onye Ọrụ / Ejiji Weebụ Ee Ee Mba
JM - Juris Master Ee Mba Mba
Nna-ukwu - Akaụntụ Ee Mba Mba
Nna-ukwu - Nchịkwa azụmahịa Ee Ee Mba
MS - Akwukwo aru nke oma Ee Mba Mba
MS - Clinical Mental Health Ndụmọdụ Ee Ee * Mba
MS - Nchịkwa Ee Ee Mba
Biko lelee onye ndenye admissions gị maka ozi kachasị ọhụrụ.
* Nke kacha nta nke ụmụ akwụkwọ 12.
You Dị Njikere Maka Mmụta Ntanetị?
Mụ ihe n'ịntanetị chọrọ ezigbo echiche na mkpebi siri ike ịhụ otu ọrụ zuru ezu. Anyị kwenyere na gị, anyị makwa na ị nwere ihe ọ ga-ewe iji mụta n'ịntanetị. Mana ọtụtụ ihe ị na-achọ oge gị, ọ dị mkpa iji hụ na ị ghọtara nke ọma ihe mmemme ịntanetị gụnyere. Mụ ihe n'ịntanetị adịghị mfe, mana ọ nwere ike bụrụ nhọrọ kacha elu nke ga - enyere gị aka mezue ebumnuche mmụta agụmakwụkwọ ka elu.
Ghọta ihe ọ pụtara ịbụ onye na-amụ ihe n'ịntanetị. Ime mgbanwe bụ igodo mmụta n'ịntanetị. Nwere ike ịmụ gburugburu ọrụ gị yana usoro oge ezinụlọ, n'oge ị nwere n'oge ezumike nri ehihie gị na tupu ma ọ bụ mgbe arụchara ọrụ. Enwere ike maka gị, ọ bụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ mgbe ndị ọzọ lachara ụra. N'agbanyeghị usoro gị, ọ ga-ekwe omume ịme klaasị n'ịntanetị. Mmekọrịta, asynchronous, teknụzụ kwalitere, simulcast, yana nkuzi ịntanetị na ntanetị nwere ike ịdị n'ime mpaghara agụmakwụkwọ ka elu. Enwere ike inwe ụfọdụ nsogbu. Learningmụ ihe n'ịntanetị nwere ike iwe oge karịa mmụta ọdịnala (ịmaatụ: klaasị elekere na nkuzi okwu na mkparịta ụka nwere ike bụrụ oge dị n'ịntanetị mgbe ị gụchara lekchọ ahụ ma dee ederede mkparịta ụka gị maka nyocha nke onye nkuzi). Ọ bụrụ n ’ị na-achọkarị ntụzịaka prọfesọ, mmụta mmụta ntanetị nwere ike isi ike karịa ngbanwe mmụta gburugburu. Anyị na-enye ọtụtụ ụzọ iji mụta; họrọ nke ga-adabara gị na ya.
Àgwà ndị na-eme ka ndị na-amụ ihe n'ịntanetị nwee ihe ịga nke ọma gụnyere ezigbo nkwukọrịta ederede edere, ikike ịgụ na ịghọta isiokwu okwu ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, ikike mgbakọ na mwepụ siri ike, ikike (na ọchịchọ) ịrụ ọrụ n'adabereghị na nlekọta, yana ịmara onwe gị iji hụ ụzọ gị n'ọdịnihu mgbe ị na-ebute ụzọ jisie ike site na nsogbu. Ga-achọ ikike ịhazi oge ị ga-eji na-amụ ihe ma na-agbaso atụmatụ ị họọrọ ọbụlagodi mgbe ihe bilitere nke nwere ike ịdọpụ uche gị. Echegbula ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ndị a nkà iyi akarị. Ndị ọrụ anyị nọ ebe a iji mee ka mmụta dịịrị mmadụ niile.
Ike ịme njikọ dị mma na ndị yiri ya mgbe ị na-amụ ihe n'ịntanetị. Ọ dị mfe karị ịga nke ọma mgbe ị nwere usoro nkwado dị mma iji nyere gị aka site na mmemme mmụta gị n'ịntanetị. Ga-enwe ụfọdụ nsogbu, ma otu n’ime ha ga-aba uru ma ọ bụrụ na ijide ogo gị n’aka gị. Inwe ezigbo ndị nlereanya na sistemụ nkwado nke nwere ike inye gị ihe niile ịchọrọ iji ruo ebumnuche gị bụ isi ihe ịga nke ọma gị. 'Ve nwere nke a!
Mara ihe na-akpali gị. Ihe ndị mere i ji kpebie ịga ụlọ akwụkwọ n’ onlinentanet ga-emetụta ikike ịmụ ihe. Mara ma ghọta mkpali gị maka ịhọrọ ịlaghachi ụlọ akwụkwọ na ịmụ ihe n'ịntanetị. Nye ọtụtụ ndị, ịmụ ihe n'ịntanetị na-enye ha ohere ịga n'ihu na-arụ ọrụ mgbe ha na-aga agụmakwụkwọ ka elu ka ha wee nwekwuo ego. Debe mkpali gị na-ebute ụzọ ka i wee nwee ike icheta ya mgbe ịmụ ihe na-agwụ ike ma ọ bụ na-egweri. Ga-etinye onwe gị na onwe gị na mmemme ịntanetị. Oge gị bụ otu n'ime ego kachasị ukwuu ị ga - eme. Mgbalị ị tinyere n'ime mmụta gị n'ịntanetị ga-adaba na otu ị si eme nke ọma na nkuzi gị. Ga-emekwa onwe gị nkwa itinye ego. Itinye ego na agụmakwụkwọ gị ga - enye gị nnukwu nloghachi na njedebe. Anyị maara na ị nwere ike ime ya, na miri emi, yabụ ị!
Nkọwa Studentmụaka Ntanetị na Nhazi
Mahadum Hodges anaghị akpa ókè na agbụrụ, ụcha, okpukperechi, nwoke na nwanyị, inwe mmekọ nwoke na nwanyị, obodo, afọ, ma ọ bụ nkwarụ na inye ohere agụmakwụkwọ ma ọ bụ ohere ọrụ na elele. A na-eji ndị otu Mahadum ọ bụla akpọrọ ihe. Mahadum Hodges anaghị akpa ókè na-adabere na inwe mmekọahụ ma ọ bụ nkwarụ na mmemme agụmakwụkwọ na mmemme ọ na-arụ, na-eso iwu chọrọ nke iwu gọọmentị etiti na steeti niile gụnyere, mana ọnweghị oke, Title IX of the Amendments Education of 1972 , Nkebi nke 504 nke Iwu Ahụ Mweghachi nke 1973, na Iwu Nwere Nkwarụ nke Ndị America na 1990. Iwu a gbasara ma ọrụ ma site na nnabata na Mahadum Hodges.
Ajuju banyere Aha IX, kwesiri idozi ya Onye Nchịkọba IX:
Kelly Gallagher, Onye isi IX Nchịkọba 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Aha IX Ọzụzụ nwere ike ịnweta Ebe a.
Ajuju banyere ndi America nwere ikike nkwarụ kwesiri ka enyere onye nhazi ADA aka:
Josh Carcopa, Director nke Mmụta Mmụta.
A ga-ezigara ajụjụ a na Fort Myers Campus na adreesị na-esonụ: Mahadum Hodges, Attn: ADA Nchịkọba, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Mahadum nwere ikike ịjụ ịbanye na onye nyocha mgbe a na-ewere ụdị omume a ka ọ bụrụ maka ọdịmma kacha mma nke onye nyocha ma ọ bụ mahadum. Mahadum anaghị anabata ndị na-eme ihe ike ma ọ bụ nwee mmeko iwu na mmemme mmemme ya. Ndị ọzọ na-enyocha akwụkwọ nwere ndekọ felony nwere ike mezue Mpempe akwụkwọ Mkpebi Iwu Felony, nke otu kọmitii nke Kọmitii Nchedo Mahadum na-enyocha. Kọmitii ahụ, onye mkpebi ya bụ nke ikpeazụ, ga-ekpebi ikike nwa akwukwo ịga n'ihu na usoro nnabata.
Ebumnuche mmụta mmụta n'ịntanetị na mahadum na-elekọta ndị isi agụmakwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ ọ bụla na-enyocha njikọta nke usoro ọmụmụ na mmemme na usoro agụmakwụkwọ. A na-eji nkuzi na mmemme mmemme ịntanetị eme ihe na iji Canvas, sistemụ njikwa mmụta mahadum. Requiredmụ akwụkwọ na-amụ ihe n'ịntanetị chọrọ ka ha mara nke ọma na ikpo okwu Canvas tupu ha amalite ọmụmụ ihe ha.
Usoro ọmụmụ ịntanetị niile a kụziri na Mahadum Hodges nwere ike ịchọ nyocha ikpeazụ. A choro umu akwukwo ka ha were ule ikpeazu (choro kamera kamera) n'oge ubochi edeputara na uzo MyHUgo. Usoro ntanetị ọ bụla nwere ego akwụ ụgwọ jikọtara ọnụ (biko rụtụ aka na usoro nkuzi na ụgwọ na Usoro ndebanye aha na ọnọdụ).
Studentsmụ akwụkwọ mmụta / mmụta mmụta dị anya nwere ike ibute mkpesa site na email gaa onlinelearning@hodges.edu.
N'ọnọdụ mmemme ụmụ akwụkwọ mmụta n'ịntanetị/anya na -eche na ụlọ ọrụ ahụ ejighị mkpesa ahụ nke ọma, ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ike nyefee mkpesa na kọntaktị steeti na -esonụ:
a) Onye na -ahụ maka anyaụfụ na -eje ozi dị ka isi steeti isi kọntaktị maka ịza ajụjụ na nchegbu sitere n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ nkeonwe yana ọfịs mmemme.
Ombudsman Ọrụ Kwesịrị Ekwesị
b) Ọ bụrụ na Ombudsman enweghị ike inyere gị aka, kpọtụrụ Office of Articulation n'ime Ngalaba Mmụta.
Ụmụ akwụkwọ mmụta mmụta mmụta anya/anya dị n'ịntanetị nke gụchara usoro mkpesa Mahadum Hodges na usoro mkpesa steeti nwere ike nwere ike ịrịọ mkpesa na-abụghị nkuzi na nkwekọrịta ikike ị nweta ikike na steeti Florida Postsecondary Reciprocal Distance Education Coordinating Council (FL-SARA PRDEC). Maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro mkpesa, biko gaa na Usoro mkpesa FL-SARA page.
Iwu ndị emetụtara (8.1 Ikike Ụmụaka na Ọrụ na 8.4 Iwu Mkpesa Ndị Mmụta) bụ ndị ebipụtara na Akwụkwọ Nkụzi Mmụta Hodges nke enwere ike ịchọta Ebe a.
Nchọpụta Ọmụmụ Online
Lelee Katalọgụ anyị maka nkọwapụta gbasara mmụta ntanetị